Mayelana NATHI | I-Ningbo Golden Classic Lighting Co., Ltd.
I-Ningbo Golden Classic Lighting Co., Ltd. is a professional professional in LED outdoor lighting and lighting poles.We have been dedicated to lighting industry for more than 15 years.
Ububanzi bemikhiqizo buhilela amalambu omgwaqo aholelekile, amalambu ezikhukhula, amalambu elanga, amalambu engadi, i-Highbay, amalambu e-Lawn nezigxobo zokukhanyisa. Siyakwamukela amaphrojekthi we-OEM ne-ODM.
Yonke imikhiqizo ithunyelwa ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, kufaka phakathi iYurophu, iMelika, i-Southeast Asia kanye neMpumalanga Ephakathi. Inkampani ine-CE, izitifiketi zeRohs. Iqembu le-QC eliqinile lisebenza kanzima emigqeni yemikhiqizo ngokuya ngohlelo lwe-SO9001-2015 lokulawula ikhwalithi. Ikhwalithi izinzile futhi inhle kakhulu.
IGolden Classic Lighting inesitshalo se-15000 m², abantu abayi-150 kufaka phakathi onjiniyela abayi-6.Sigcina sithuthukisa imikhiqizo emisha minyaka yonke.
Izixhobo eziyinhloko ziqukethe imishini engu-1000t, 700t, 300t yokufa, imishini engu-3 ye-CNC, imishini yokufaka i-LED kanye ne-welding, umugqa wokumboza i-Auto Powder, imigqa emi-3 yokuhlanganisa kanye nemigqa emibili yokuguga. Ukukhiqizwa umthamo 500,000 PC izibani nezigxobo minyaka yonke.
Ngaphandle kwalokho, ilebhu entsha ngokuphelele enekhono lokuhlolwa kwe-IES, i-IP, ukuhlolwa kwe-IK, ukuhlolwa kokusebenza kokushisa nokuhlolwa kweLumen.
Isiqubulo sethu sithi Ukwenziwa kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme emhlabeni wonke.Sifuna ubudlelwane obude bebhizinisi namakhasimende anekhwalithi enhle nentengo efanelekile.
Singumkhiqizi wezibani ongaphandle onguchwepheshe.
Umgomo wethu ukuhlinzeka ngezixazululo zenkambiso kumakhasimende nasemakethe.
Yize izimakethe, izinhlelo zokusebenza, kanye namakhasimende ehlukile, uJindian unomqondo oyingqayizivele wokuqondisa amakhasimende empumelelweni.
Kunoma yikuphi ukubonisana nempendulo, sizophendula ngokubekezela nangokucophelela.
Kunoma imuphi umbuzo, sizonikeza ikhotheshini enengqondo ngokushesha okukhulu.
Kunoma imuphi umkhiqizo omusha, sizoxhumana namakhasimende futhi sicabangele imibono yawo ukwenza umkhiqizo omuhle kakhulu.
Nganoma iyiphi i-oda, sizoqeda umkhiqizo ngesikhathi.
Sizosebenzisa isikhathi namandla ukuxazulula zonke izinkinga, noma ngabe zivame kangakanani. Sizohlala sikuhlalisa njalo, futhi ungathola ukuthi singakhuluma ulimi lwakho futhi sazi ubuchwepheshe bakho. Kungakho sibambisane ngempumelelo namakhasimende amaningi kangaka avela emazweni ahlukene.
Isisekelo segolide sakudala esisekelweni sebhizinisi "esezingeni eliphakeme, ukucacisa okuphezulu, ukukhubazeka okungatheni", naka ikhwalithi, ukwakha ibhizinisi lokuncintisana. Sihambisana nesitayela somsebenzi "sokusebenza ngobuqotho nobuqotho, ungapheli amandla, sebenzisana nethimba, qhubeka uthuthuka", wamukela ngobuqotho amakhasimende amasha namadala.
Ngokwezifiso: Sineqembu eliqinile le-R & D, futhi singakha futhi sikhiqize imikhiqizo ngokuya ngemidwebo noma amasampula amakhasimende awanikezayo.
Izindleko:Sine yethu siqu ekubunjweni Foundry, CNC machining ifektri kanye pole imboni. Ngakho-ke singanikela ngentengo engcono kakhulu nemikhiqizo ehamba phambili ngqo.
Ikhwalithi: Sinelebhu yethu yokuhlola nemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme kakhulu futhi ephelele, engaqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo.
Amandla:Amandla wethu wokukhiqiza angaphezulu kuka-1,000,000 asethiwe. , singahlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukene ngobuningi bokuthenga obuhlukile.
Imikhiqizo: Sigxila ekwenzeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme yezimakethe ezisezingeni eliphezulu.Imikhiqizo yethu ihambisana nezindinganiso zamazwe omhlaba, futhi ithunyelwa kakhulu eYurophu, eMelika, eJapane nakwezinye izindawo emhlabeni jikelele.
Isevisi:Ikhasimende lihlala kuqala. Kungumsebenzi wethu ukunikela ngezinsizakalo ezihamba phambili kuwo wonke amakhasimende, noma ngabe amakhasimende amakhulu noma amancane.
Ukuthunyelwa: Sikude ngamakhilomitha angama-35 kuphela ukusuka e-Ningbo Port, kulula kakhulu futhi kusebenza kahle ukuthumela izimpahla kwamanye amazwe.